Iska ilow helitaanka qaabeynta qaabdhismeedka 3B: Wanaagsan, Qurxan oo Jaban | Abuurista khadka tooska ah
Haddii aan rabno inaan helno xirfadle waxaan badiyaa raadinaa saddexda BWaxaan ula jeedaa, wanaagsan, quruxsan oo raqiis ah, laakiin tani waa mid ka mid ah waxyaabaha aan laga heli karin adduunka naqshadeynta garaafka.
Haddii waxa aad raadineyso ay yihiin naqshad wanaagsan, in lagu sameeyo waqti gaaban oo aanad wax badan ku bixinayn, maxaa yeelay waxay u badan tahay inaad shaqo xun heli doonto, xitaa waa la qaban karaa qof uu hadda ka bilaabayo aaggan ama kaliya hiwaayad aan aqoon lahayn.
1 Maxay suurtagal u ahayn in la bixiyo 3B?
2 Waxaan ku siinaynaa tusaale cad
Maxay suurtagal u ahayn in la bixiyo 3B?
Waxaa laga yaabaa inaadan siinaynin ahmiyad weyn, laakiin waa inaad maskaxda ku haysaa taas sawirka shirkadeed waa inuu noqdaa mid aad u faahfaahsanMaaddaama ay wax badan ka sheegayso, xitaa waxay noqon kartaa tan ugu fiican goobtaada, laakiin haddii astaantaada ama xayeysiintaadu ay xun yihiin, cidina uma maleyn doonto inaad xirfad wanaagsan tahay.
Dhamaan nashqadeeyayaasha ama inteena badan, Waxaan ku bilownay inaan siino shaqooyin iyo naqshado si aan awood ugu yeelanno inaan horumarino galkayaga gaarka ah, laakiin haddii aan dib u jaleecno oo aan isbarbar dhig xoog leh ku sameyno shaqadii aan bilowgii qabannay iyo kuwa aan hadda qabaneyno, waxaa hubaal ah inaan ogaan doonno inuu jiro farqi weyn.
Waa inaanan waligeen ilaawin taas fasallada waxaad ku baranaysaa aragtida, laakiin sanadaha iyo shaqada adag waxay na siinayaan xirfad iyo khibrad.
Waad heli kartaa la xiriir naqshadeeye aan lacag badan ka qaadin shaqadiisa iyo in marka laga soo tago wax walba uu yahay xirfadle, laakiin haddii aad isku aragto xaaladdan ma aaminsani in shaqadaada lagu diyaarin karo waqtiga la filayo maadaama dad badani ay codsan doonaan adeegyadiisa iyo haddii aad qayb ka tahay dadkan, waxaan kugula talineynaa inaad is dejiso oo aad nasato intaad fadhido oo aad sugto in shaqadaada la qabto.
Waxaan dhamaanteen jeclaan lahayn inaan helno gaari nooca soo daaha ah oo aan ku iibsan karno qiimo la mid ah kii nagu kalifay toban sano ka hor, laakiin waxaa hubaal ah inaadan u tagin goob lagu iibiyo gawaarida si aad u weydiiso milkiilayaasha inay gaariga kaaga tagaan isku qiimo ah kii kale ee tobanka sano ka hor iyo haddii aynaan khalad ku ahayn jawaabta,Maxay naqshadeeyayaashu had iyo jeer isugu dayaan inay weydiistaan ​​qiimo dhimis?
Marnaba ma jiri doono qof kuu sheega inaad wax fudud ka dhigto si aanad lacag badan uga qaadin ama kuu sheegaya inaad samayso astaan ​​fudud oo aad dhigto maalmo uun.
Waxa kale oo jira qofka leh samee bogga laakiin waxyaabo badan ha dhigin ama bilaabaya inuu ku waydiiyo inaad tirtirto waxyaabo aad hore u samaysay si qiimo dhimis loogu sameeyo qiimaha ugu dambeeya.
Waxaan ku siinaynaa tusaale cad
Tani waxay la mid tahay qofka guri u aaday hagaajinta kuleeliyaha oo keli ah inuu riixo batoon yar si uu u shaqeeyo, ka dib markaasi ayuu sameeyaa qaansheegta oo qofka guriga iska leh ayaa ka cabanaya qiimaha ay ku kacday riix badhankaas yar, laakiin runtu waa taa waxa qofka dayactiray kululeeyaha ku eedeeyay waa aqoontiisamar haddii uu ogyahay badhanka uu riixayo.
Tani waxay la mid tahay waxa ku dhaca naqshadeeyayaasha garaafka, maaddaama ay isku mid tahay sameynta astaan ​​labaatan daqiiqo ah sida labaatan saacadood, sicirku wuxuu noqon doonaa mid isku mid ah, maadaama Waxaa laga qaadaa naqshadeynta astaanta oo maahan waxa ay qofka ku qaadaneyso inuu horumariyo.
Waa in la ogaadaa in nashqadeeyayaashu had iyo jeer ay rabaan in shaqadeenu ahaato mid tayo leh oo markay arkaan ay qof walba la yaabaan, sidaa darteed badiyaa ma sameyno naqshado fudud oo fool xun kaliya in hoos loo dhigo qiimaha kuwan, laakiin naqshadahan badanaa waxaa laga sameeyaa isku mid.
Hadana haddii aad hesho qof ku siin doona qiimo dhimis samaynta naqshad kaliya midab leh shan xaraf, kani waa qof aan hubaal lahayn daraasadaha naqshadeynta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Iska ilow helitaanka qaabeynta qaabdhismeedka 3B: Wanaagsan, Qurux badan oo Jaban
Sawirka Shirkadeed: Baro Abuurista Tilmaamaha Qaabka Tilmaamaha Vector-ka ee Tallaabo-tallaabo ah
Ku samee sawir Andy Warhol muuqaal leh sawiradayada